RASMI: Goolhayihii, Tababarihii Iyo Goolkii Ugu Fiicnaa Sannadka Ee Abaalmarinta The Best FIFA Football Awards Oo Si Rasmi Ah Loogu Dhawaaqay | Laacib.net
RASMI: Goolhayihii, Tababarihii Iyo Goolkii Ugu Fiicnaa Sannadka Ee Abaalmarinta The Best FIFA Football Awards Oo Si Rasmi Ah Loogu Dhawaaqay
September 23, 2019 Balaleti 5
Waxaa caawa la bixiyay ilaa sagaal abaalmarin oo FIFA ay gudoonsiiyay shaqsiyaadkii ugu fiicnaa kubada cagta dundia ee rag iyo dumarba, iyadoo xaflada abaalmarinta The Best FIFA Football Awards ay markii ugu horeysay ka dhacday magaalada Milan ee dalka Talyaaniga.
Sannadkan waxaa abaalmarinada lagu soo kordhiyay goolhayaha sannadka iyo weliba shaxda kooxda sannadka dumarka oo markii ugu horeysay iyadana la shaaciyay.
Abaalmarinta Goolhayaha Sannadka
Goolhayaha Liverpool Alisson Becker ayaa ku guuleystay abaalmarinta goolhayaha sannadka ee 2019 ee FIFA ka dib markii uu kooxda Liverpool la qaaday Champions League xilli ciyaareedkii la soo dhaafay islamarkaana uu muhiim u ahaa tartan adkaa ee ay u galeen horyaalka Premier League oo ay hal dhibic uga qaaday kooxda Manchester City.
Alisson waxa uu sidoo kale koobka Copa America la qaaday xulka qarankiisa Brazil kuwaasoo ciyaartii finalka ka badiyay Peru xagaagan.
Waxa uu abaalmarinta ka qaaday goolhayaha ay isku wadanka yihiin Ederson kaasoo seddex koob oo maxali ah kula guuleystay kooxda Manchester City xilli ciyaareedkii la soo dhaafay iyo goolhayaha Barcelona Marc ter Stegen oo isna Barcelona la qaaday horyaalka La Liga.
Abaalmarinta Tababaraha Sannadka
Macalinka kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa ku guuleystay abaalmarinta tababaraha sannadka ee FIFA ka dib markii uu kooxdiisa ku hogaamiyay koobka Champions League xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
Waxa uu abaalmarinta ka qaaday macalinkii uu kaga badiyay finalka Champions League ee Tottenham Mauricio Pochettino iyo tababaraha Manchester City Pep Guardiola kaasoo Man City ku hogaamiyay horyaalka Premier League, FA Cup iyo Carabao Cup xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
Abaalmarinta Goolka Sannadka
Daniel Zsori ayaa ku guuleystay abaalmarinta goolka sannadkan ee FIFA Puskas Award ka dib goolkii laba lugaaleyda ahaa ee uu u dhaliyay kooxda dalka Hungary ee Debrecen. 18 jirkaan ayaa kulankiisii ugu horeysay u dheelayay kooxdiisa waxaana uu ku qaaday abaalmarinta Pukas Awarad.
Waxa uu abaalmarinta ka qaaday Lionel Messi oo aan marnaba abaalmarintaan ku guuleysanin kaasoo isna gool qurux badan ka dhaliyay kooxda Real Betis iyo xiddiga River Plate Fernando Quintero oo laad xor cajiib ah u dhaliyay kooxdiisa sannadkan.
Silvia Grecco oo ah hooyo wiilkeeda oo indho la’ u codeysa kulamada ay taagaan garoomada si uu u la socdo kooxdiisa. Waxay cod ahaan ugu sheegtaa wax walba oo garoonka ka socda wiilkeeda Nikolas madaama uusan arki karin. Markii ay abaalmarinta aqbaleysa waxay wiilkeeda u sharaxday masraxa uu taagan yahay iyo dadka uu hortaagan yahay.
Tababaraha sannadka ee dumarka
Jill Ellis ayaa loo magacaabay tababaraha sannadka ee dumarka ka dib markii ay xulka Mareykanka ku hogaamisay Koobka Adduunka sannadkan. Waxay abaalmarintaan ka qaaday tababaraha xulka England Phil Neville.
Goolhayaha sannadka ee Dumarka
Markii ugu horeysay ee abaalmarinta la bixiyo waxaa goolhayaha sannadka ee dumarka ku guuleysatay kabtanka xulka qaranka Holland Sari van Veenendaal oo wacdarro ka dhigtay Koobkii Adduunka ee sannadkan lagu qabtay France. Waxay wacdarro u soo dhigaty Arsenal sannadkii hore, waxayna haatan la joogtaa Atletico Madrid.
Ciyaar wanaaga sannadka
Tababare Biesla iyo kooxdiisa Leeds United ayaa ku guuleystay ciyaar wanaaga sannadka. Ka dib markii xiddig Leeds ka tirsan uu gool ka dhaliyay Aston Villa iyadoo ciyaaryahan uu dhaawacmay loona baahan yahay in kubada la bixiyo, waxay aheyd kulan loogu soo baxayay Premier League.
Tababare Biesla ayaa ku amray kooxdiisa Leeds inay Aston Villa u ogolaadaan inay gool barbaro ah dhaliyaan iyadoo cidna aysan raacaneynin ama difaacaneynin. Ciyaarta maalintaas 1-1 ayay ku dhamaatay. Lugtii labaad waxaa hartay Leeds United.
Waan soo qori doonaa abaalmarinada kale isla markii la bixiyo
RASMI: Isku Aadka Wareega 16ka Ee Koobka Carabao Cup Oo La Soo Saaray - Afar Kooxood Oo Waa Weyn Oo Qoorta La Isku Geliyay